हप्ताको सृजनात्मक: श्री ग्राफिकसले हामीलाई नाइकेसँगको उनको अनुभवको बारेमा बताउँछन् क्रिएटिव अनलाइन
शुभ प्रभात क्रिएटिभहरू! आज हामी डिजाईनको संसारबाट एक महान कलाकारको साथ हाम्रो नयाँ भाग सुरूवात गर्दछौं। हामीले पाउनु हाम्रो लागि ठूलो सम्मान हो। डोमिंगो लोजानो, उहाँलाई बोलाइए जस्तै, एक शानदार रचनात्मक र स्पष्ट प्रमाण हो कि यदि तपाईं आफ्ना सपनाहरूको अनुसरण गर्नुहुन्छ र कडा परिश्रम गर्नुभयो भने, सफलता निश्चित छ। स्प्यानिश मूलका, डिजाइनर र समान मापनमा इलस्ट्रेटर, उनीसँग एउटा निर्दोष क्यारियर छ जुन काम गरिरहेको छ नाइके, लस एन्जलस लेकर्स वा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको कोबे ब्रायन्ट। यहाँबाट हामी तपाईंलाई उनको पोर्टफोलियो भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं तलको ठेगाना र आफ्नो कार्यको सूचीमा हेर्नुहोस् जुन फालतू छैन।
अब हामी उहाँसँग केहि क्षण बाँड्न जाँदैछौं र विषयहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन रचनात्मक समुदायलाई धेरै चिन्तित गर्दछ। तर, हामी सुरुमा सुरू गरौं:
प्रश्न: हामीलाई भन्नुहोस् डोमिoming्गो, यो सबै कसरी सुरु भयो? तपाईले कहिले पत्ता लगाउनु भयो कि तपाईको संसार ग्राफिक डिजाइनको संसार हो?
R: तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि सब कुरा बचपनमा सुरु हुन्छ, त्यो क्षणमा जहाँ पेन्सिलले तपाईंको मार्ग पार गर्दछ र तपाईं केही स्क्रिब्लिंग गर्नुहुन्छ। यो एक विचित्र संवेदना हो जुन मेमोरीमा भण्डार गरिएको छ र जुन म आजसम्म याद गर्न सक्छु। रंगीन पेन्सिलको टिप खर्च गर्नु, मिक्स गर्नु र प्रयोग गर्नु, स्ट्रोकहरू बनाउनु जुन तपाईंको आफ्नै हातबाट बाहिर आउँदछ र यो मैले सँधै याद राख्छु। त्यस क्षणदेखि तपाईं पूर्ण रूपमा आफ्नो सिर्जनात्मकताको नियन्त्रणमा महसुस गर्नुहुन्छ र यस्तो चिन्ताको श्रृंखलामा भाग लिनुहुन्छ जुन तपाईंलाई यो गर्न जारी राख्नको लागि धकेल्छ।
अधिक विशिष्ट पक्षको रूपमा ग्राफिक डिजाइनको क्षेत्र मेरो किशोरावस्थामा पर्दाफास भयो, जब डिजिटल विश्व मेरो हातमा आयो। म १ 15 बर्षको उमेर सम्म मसँग राम्रो कम्प्युटर उपकरणहरू लिने अवसर थिएन र त्यो हो जब मैले क्षितिज खोल्न सुरु गरें।
प्रश्न: किन ग्राफिक डिजाइन? त्यहाँ एक कलाकार वा काम छ कि एक रचनात्मक को रूप मा तपाईंलाई प्रेरित र प्रभावित?
R: ग्राफिक डिजाइनले मलाई मेरो चिन्ता बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍यायो र दृश्य सम्बन्धी माध्यमबाट मैले आकार दिन खोजेका ती सबै उद्देश्य र भावनाहरूलाई पोषण दियो। विचारहरू बचत गर्न सबै आवश्यक र गैर-आवश्यक उपकरणहरू हातमा राख्नुहोस्।
म धेरै कलाकारहरू वा डिजाइनरहरू उद्धृत गर्न सक्दछु जसले मलाई धेरै बर्षहरूमा आकर्षित गरे।
मेरो विचारमा, सबै कुरा सम्पूर्णको एक हिस्सा हो, त्यो हो, दृश्य शिक्षा परिवर्तन हुँदैछ र निरन्तर आन्दोलनमा। केवल एक कलाकारको उद्धृत गर्न अरू धेरैको नाम लिनु हुँदैन र म विचार गर्दछु कि तिनीहरू सबै, हामी सबै जस्तै, रचनात्मकताको यस संसारमा केहि भन्नु छ।
Q: तपाइँको काम को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुरा के हो? सबैभन्दा खराब के हो?
R: मेरो कामको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा थाहा पाउनु हो कि म के गर्छु अनौंठो हुन्छ। यो डिजाइनरहरूको संसारको लागि धमकी बनाउने छ उनीहरूको हातमा सिर्जनाको उपकरण। एउटा पेन्सिल, कागज, कलम वा इरेजर कुनै पनि सन्देश पठाउन संसारको ढोका फाल्ने सम्भावनाहरूको असीमित स्रोत बन्छ।
कुनै श doubt्का बिना उत्तम यो कि तपाईं उत्साहित हुनेछ कि प्रोजेक्टको कीपिया हुनु हो।
सबैभन्दा खराब? यो इमानदारीपूर्वक एक राम्रो प्रश्न हो। जब तपाईं केहि बारे मा भावुक हो, यो नकारात्मक पक्षहरु पाउन गाह्रो छ। यद्यपि यो सत्य हो कि मेरो काममा सबैभन्दा "असहज" हिस्सा त्यो हो जसले कहिलेकाँही तपाईंलाई निराश तुल्याउँछ, यो त्यो हो जसले कहिलेकाँही ठूलो टाउको दुखाइ दिन्छ, निस्सन्देह विचारहरूको खोजीको चरण।
Q: हामीलाई तीन अवयवहरू भन्नुहोस् जुन तपाईं राम्रो ग्राफिक कलाकार हुन आवश्यक मान्नुहुन्छ।
R: सृजनात्मक बन। लगनशीलता। महत्वाकांक्षा।
Q: त्यहाँ तीन मिथकहरू छन् जुन डिजाईनरको फिगरलाई लाग्यो। तपाइँ एक पेशेवरको रूपमा, तपाइँ निम्न मिथकको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? "डिजाइन एक स्थिर पेशा होइन"
R: म सहमत छैन। प्रत्येक प्रोफेशनलले उसले गरेको काममा राम्रो हुनुपर्दछ र सबैभन्दा माथि उसले के गर्छ त्यो मनपर्दछ, 500०० पटक "उसले यो मनपर्दछ।" जब यी दुई भेरिएबलहरू उचित तरीकाले दिइन्छ, डिजाइनरले बाटो पत्ता लगाउँछ र सबै भन्दा माथि उसको पेशेवरको रूपमा खुशी भेटिन्छ। तर मँ सबै पेशाहरु को लागी लागू हुन को लागी विचार गर्दछु।
प्रश्न: "ग्राफिक डिजाईन (सबै कलात्मक पेशा जस्तै तरीकाले) बाँकी पेशाहरु भन्दा कम कठोर वा गम्भीर छ"
R: ग्राफिक डिजाईनले भर्खरका वर्षहरूमा धेरै दुःख भोगेको छ, तर यो पेशा सँधै ठूला संस्थाहरूद्वारा अत्यन्त सम्मान गरिएको छ। हामीले सँगै र एक टोलीको रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ, यस समाजले योगदान गर्न सक्ने मानहरू र जगहरूलाई सुदृढ पार्दै, नयाँ बेचैन दिमागको कुतूहल जगाउँदै।
Q: graph ग्राफिक डिजाइनर बन्नको लागि तपाइँले कसरी कोरल्ने भनेर जान्नुपर्दछ »
R: यो पेशेमा तपाईले आफ्नो सन्तुलन, तपाईको सामर्थ्य पत्ता लगाउनु पर्छ। सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको के हो आफैलाई कसरी बचाउने भन्ने बारे जान्नु नै उत्तम हुन्छ। सीमाहरू मात्र सीमित छन्।
प्रश्न: यदि तपाईंले आफैंमा पेशेवरको रूपमा केहि चीज हाईलाइट गर्नुपर्‍यो भने, त्यो के हुन्छ?
R: मलाई मेरो टाउकोमा प्रशंसा दिन धेरै दिइएको छैन, तर यदि मैले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो भने म महत्वाकांक्षा र लगनशीलता भनेको मेरो शक्ति हो भन्दछु।
Q: कुनै तरिकामा एक माध्यम एक माध्यम हो, उसले हामीलाई समानान्तर वास्तविकतासँग जोड्दछ, अर्को वैचारिक प्रणालीको साथ, उसले आफ्ना श्रोताहरूलाई अर्को विश्वमा लैजान्छ र उनीहरूलाई त्यो संसारमा आकर्षण महसुस गराउँदछ। संसारले तपाईको कामले हामीलाई कसरी जोड्दछ? विश्वव्यापी रूपमा तपाईंको सिर्जनाहरू के चित्रण गर्दछ?
R: म शक्ति मार्फत दर्शक सम्म पुग्न कोसिस गर्दछु। म "ग्राफिक फोर्स" लाई रचनात्मक संसारको पवित्र grail मान्दछु, ओर्ब र पाण्डोरा बक्स जसले दर्शकलाई घेरेको भावनाहरू र संवेदनाहरूको प्रवाहलाई मुक्त गर्दछ। म जहिले पनि मेरो कार्यहरू मार्फत अलमल्ल, उत्तेजित, उत्साहित, उत्साहित, आश्चर्य र अचम्मित पार्ने प्रयास गर्दछु।
मेरा सबै कार्यहरू उनीहरूको बृहत विवरणको विशेषता हो, दुवै ग्राफिक र वैचारिक अंशमा। यद्यपि मेरो सुरूदेखि नै मेरो कामको धेरै विकास भएको छ, तिनीहरू सँधै केहि परिसरहरू राख्दछन्: शक्तिशाली अवधारणा र विवरणहरूको ठूलो मात्रा।
प्रश्न: तपाइँ कसरी एक प्रेरणा संकट को समाधान गर्नुहुन्छ?
R: सबै रचनात्मकहरूलाई मेरो सल्लाह भनेको दैनिक रूपमा आफुलाई ग्राफिक स्तर स्रोतहरू समृद्ध पार्नु हो, चलचित्रहरू हेर्नु वा यस संसारको बारेमा पढ्नु वा अन्य धेरै त्यस्ता तरिकाहरू हुन् जुन यी संकटहरू हुनबाट रोक्दछन्। अझै, यदि हामीसँग खराब रचनात्मक पल छ भने, विच्छेदन गर्नु राम्रो हो। जब एक दिमाग अवरुद्ध हुन्छ हामीले यसलाई एक पूर्ण भिन्न गतिशीलमा परिचय गर्नुपर्दछ, केहि यसलाई पुन: सुरु गर्न। पैदल यात्राको लागि जानुहुँदै, राम्रो सूर्यास्तको आनन्द लिनु वा सहरी ट्राफिक हेर्नको लागि बस्नु धेरै प्रभावकारी तरिकाहरू हुन् जसले हामीलाई क्षणहरूबाट बचाउँदछ जब हामीलाई के गर्ने थाहा छैन, तर हामीले केहि गर्नुपर्दछ।
प्रश्न: नाइके को लागी अनुभव कस्तो थियो?
R: यस महान ब्रान्डको लागि काम गर्नु भनेको व्यक्तिगत स्तरमा अविश्वसनीय अनुभव हो र पेशेवर स्तरमा भावुक। मलाई एक महान एनबीए प्लेयरको लागि प्रोजेक्ट विकास गर्ने अवसर दिइयो। उहाँ र उनका प्रतिनिधिले मेरो विचारलाई यत्ति धेरै मन पराउनुभयो कि उनको छवि अधिकार, नाइके, INC को स्वामित्व रहेको इकाईसँग एक बैठक व्यवस्थित गरिएको थियो। यस महान स्टारको साथ मुख्यालयमा एक बैठक पछि, रचनात्मक र प्रबन्धकहरूको एक ठूलो संख्या टोलीको छवि प्रवर्धन गर्न र विशेष गरी यस खेलाडीको मेरो काम प्रयोग गर्न सहमत भए, एक पटक च्याम्पियनशिप समाप्त भएपछि। कुनै श doubt्का बिना, म मसँग अनुभव र विशाल व्यावसायिक भार लिन्छु जुन त्यतिखेर सिकिएको थियो, जहाँ म काँधमा मल्टिन सफल भएँ ती मध्ये कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विज्ञापन उद्योगको महान मान्नेहरूसँग। यस ब्रान्डको मान्यता प्राप्त कुनै पनि कलाकार र रचनात्मकको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यद्यपि म यो विचार गर्दछु कि तपाईंले आफ्नो खुट्टा जमीनमा राख्नुपर्दछ, मेरो संघमा धेरै सहकर्मीहरू र पेशेवरहरूबाट प्रत्येक दिन काम जारी राख्ने र सिक्ने काम गर्नुहोस्।
Q: यदि तपाइँले एक डिजाईन विद्यार्थीलाई सल्लाह दिनुपर्‍यो भने, के हुन्छ?
R: तपाईलाई के गर्न मन पर्छ सधैं गर्नुहोस्। डिजाईनको संसार डिजाइनमा सीमित छैन, तपाईं रचनात्मकताको यस शाखाबाट कौशलको एक विशालको विकास गर्न सक्नुहुनेछ। जान्नुहोस् र तपाईंको वरिपरिको सबै कुरा सिक्नुहोस् र सबै भन्दा माथि सँधै रचनात्मक समाधानहरूको साथ आउँनुहोस्।
एक रचनात्मकको रूपमा, म एक आधार छोड्दछु जुनमा म सँधै मेरो काम सेट गर्दछु: your तपाईको दिमागमा रहेको सबै कुरा पनि कागजमा हुन सक्छ
Q: तपाइँको दिमागमा एक परियोजना छ? के तपाइँसँग कुनै दीर्घकालीन लक्ष्यहरू छन्?
R: सिकाई राख्नुहोस्, सिर्जना मा राख्नुहोस् र व्यापार मा प्रत्येक पेशेवरको मजा लिन मेरो मुख्य विचार हो। कसैले मलाई एकपल्ट भनेका थिए: "तपाइँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेको बारेमा चिन्ता गर्नुहोस्, बाँकी उपहारहरू हुन् जुन जीवनले तपाइँको प्रयासको लागि पुरस्कारको रूपमा ल्याउँछ।" अवश्य पनि हामी सबैसँग लक्ष्य वा आकांक्षा, सपना र महत्वाकांक्षाहरू छन्। म असन्तुष्ट दिमागको कारण सधैं काम र व्यावसायिक विस्तारको लागि खुला छु।
अवश्य पनि, यदि तपाईं यो जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो मनमा राख्नु भएको सबै चीज प्राप्त गर्नुहुनेछ। क्रेटिभास अनलाइनमा तपाइँको उपस्थितिबाट हामी सम्मानित छौं र यहाँबाट हामी तपाइँलाई आफ्नो क्यारियर भर धेरै धेरै विजयहरू संकलन गर्न चाहान्छौं। र तपाईंलाई हामी, हामी तपाईं को उहाँको कार्यहरूको एक संग्रह छोड्छौं ताकि तपाईं राम्रो काममा रमाउन सक्नुहुन्छ, सम्झनुहोस् कि तपाईंले उहाँको सबै पोर्टफोलियोमा कामहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ: श्री ग्राफिकस आधिकारिक
Ucla विश्वविद्यालय टी-शर्ट डिजाइन
TShirt डिजाइन लस एन्जलस लेकर्स
एपीएस को ग्रह को वृद्धि
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » हप्ताको सृजनात्मक: श्री ग्राफिकसले हामीलाई नाइकेसँगको उनको अनुभवको बारेमा बताउँछन्
तपाईं एक कलाकार हुनुहुन्छ ... यसलाई धेरै पश्चाताप गर्दै, यो लाजको कुरा हो कि तपाईं आफूलाई टाट्टोको संसारमा समर्पित गर्नुहुन्न, कुनै श doubt्का बिना यसले मलाई तपाईंको हातमा छोड्नेछ ... यसलाई जारी राख्नुहोस् र राम्रो भाग्य।
बधाई छ डोमी, प्रत्येक छवि तपाईंको सबै जोश र समर्पण बोक्दछ।
मलाई थाहा छ तपाईं धेरै टाढा जानुहुन्छ, कि यो तपाईंको चीज हो र केहि परिवर्तन हुँदैन! र त्यहाँ कोही अर्को हुने छैन जो तपाईसँग मेल खान सक्छ वा तपाईको चीजको प्रयास गर्न सक्दछ।
किनभने अरू कसैसँग त्यो उज्ज्वलता छैन, त्यो जादू र त्यो नम्रता जुन तपाईं मात्र हुन सक्नुहुन्छ।
मार्बेललाई जवाफ दिनुहोस्
बधाई छ श्री ग्राफिक !!! जब म तपाईंको सबै कार्यहरू देख्छु, म शुद्ध रहन्छु, केवल शुद्ध कला, तिनीहरू पूर्ण छन्, हातले !!!! यो ती व्यक्तिहरूसँग टाँसिएको छ जुन कम्प्युटर प्रोग्रामको साथ धेरै राम्रा चित्रहरू बनाउँछन्। पिकासो, गोया ... उनीहरूसँग त्यो टेक्नोलोजी थिएन न त तपाईं आफैले बोक्ने उपहारलाई प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईं एक कमबख्त क्र्याक हुनुहुन्छ, एक व्यक्तिको रूपमा मात्र होइन तर म दिमागमा एक साँचो प्रतिभा हो, हाहा। तपाईं व्यक्तिमा रचनात्मकता हुनुहुन्छ, तर बन्नको लागि तपाईंले आफूले के गरिरहनुपर्दछ (र यसले देखाउँदछ), महत्वाकांक्षा र लगनशीलता चाहिन्छ, बाँकी मात्र आउँछ (यी तपाईंको शब्द हुन् र तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ)। यदि तपाईं यो जारी राख्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ कुनै अवरोध छ जुन तपाईं जित्न सक्नुहुन्न। मँ चाहन्छु कि तपाईं त्यो दृढताका साथ जारी रहनुहोस्, म तपाईंलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु, र मलाई आशा छ कि ठूला ब्रान्डले कलाकारको कदर गर्दछ जसले उहाँलाई धेरै पैसा कमाउन सक्छ, तिनीहरूले पहिले नै समय लिइरहेका छन्। म मेरो बधाईको बधाई चाहन्छु। मेरो साथीलाई सादर !!!
जसरी हामीले यहाँ प्रशंसा गरेका थियौं, एकले मात्र एउटा रचनात्मक देख्दैन, तर अर्को व्यक्तिले पहिले नै एक हो भन्ने ठूलो सम्मान भन्दा बाहिर देखिएको छ आइतवार, वफादार मित्र, हरेक दिन तपाईंले अधिक र अधिकमा विजय प्राप्त गर्नुभयो, केवल स्क्रिप्टिंगको त्यो बचपनले नेतृत्व गरेको छ ठूलो रूख हीरा जस्तो हुर्कन र पालिश गर्न जुन तपाईं पहिले नै थिए, त्यस्तो मानसिक क्षमता तपाईंको दिमागमा ती विचारहरूलाई स्पष्ट पार्न र कागजमा राख्नुहोस्। सबैजना यसमा सक्षम छैनन्, ती मानहरू जुन तपाईंसँग छ र देखाउनुहोस् त्यो पहुँचमा छैन। सबै हातहरुका कारण, म तपाईंलाई बधाई दिन्छु कि तपाईं को हुनुहुन्छ र तपाईं कहाँ पुग्नुभयो तपाईं पुग्नुभयो, जुन यो महान व्यक्तिगत र पेशेवर पथको सुरूवात मात्र हो, कि तपाईं आफ्नो फलामलाई पार गर्न जारी राख्नुहुन्छ लक्ष्यहरू र त्यो कहिल्यै बिर्सदैनन्, रचनात्मक हुनुहोस्, सँधै।
Juanlu लाई जवाफ दिनुहोस्
Yvonne hammond भन्यो
महान काम आइतवार!
Yvonne Hammond लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्टोनियो भल्भर्डे मोन्टेरो भन्यो
नमस्ते मिंगुनी, म तपाईंको भान्जा भाइ लोली सर्जियोकी आमा हुँ, तपाईंको अन्तर्वार्ता पढ्दा र तपाईंको काम देख्दा म चुपचाप बस्छु, तिनीहरू शानदार छन्, तपाईं एक कलाकार हुनुहुन्छ।
यसलाई सरल राख्नुहोस्, एक सरल र मेहनती व्यक्ति। तपाईंको आमा बुबा तपाईंमा गर्व गर्नुहुनेछ।
हामी सबैबाट धेरै चुम्बनहरूले यसलाई बधाई राख्छ
एन्टोनियो भल्भर्डे मोन्टेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते प्रिय, म तपाईलाई निकै गर्व गर्छु, तपाई उत्तम हुनुहुन्छ, यस्तो जारी राख्नुहोस् र तपाई जीवनमा प्रस्तावित सबै थोक हुनेछ।
म तपाईंलाई असीम मन पराउँछु र तपाईंलाई थाहा छ कि म सधैं यहाँ आउनेछु जब तपाईंलाई मलाई आवश्यक पर्दछ।
Ole ole र ole लामो जीवन दिनुहोस् आमा जसले तपाईंलाई जन्म दिईन्
तपाईं ठूलो हुनुहुन्छ।
डोमिo्गो तपाईं एक प्रतिभाशाली काका हुनुहुन्छ र एकै समयमा तपाईं जहिले पनि समान हुनुहुन्छ। प्रयास र काम बिना, तपाईं त्यो सबै प्रतिभा को लाभ लिन सक्नुहुन्न, तपाईं यो छ भने पनि, मेरा साँचो बधाई र प्रशंसा। अमेरिकी सपना केवल ती व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध छ जसले विश्वास गर्छन् कि असम्भव सम्भव छ भनेर विश्वास गर्दछ, यसका लागि लड्न, यसलाई प्राप्त गर्नुहोस् र हराउने वा बाटोमा पागल नहुने। म आशा गर्छु कि तपाइँको सिर्जनशीलता र धेरै धेरै प्रतिभाको आनन्द लिइरहौं। एक ठूलो आलिंगन कलाकार !!!
बधाई आइतवार !! निस्सन्देह, मलाई थाहा छ कि एक धेरै रचनात्मक सोच हुनुको अलावा, तपाईंले आफ्नो काममा तपाईंको व्यावसायिकता स्पष्ट पार्नुभएको छ, त्यसैले तपाईंको शब्दहरू रेखांकित, एक कलाकारको स्तम्भहरू निस्सन्देह प्रतिभा र काम हुन्।
नारा रिवेरो भन्यो
मैले भर्खर यस ब्लग पत्ता लगाए र यो धेरै रमाईलो छ। लेखहरू अचम्मका र महान व्यक्तिहरू र कलाकारहरूको हुन्। उदाहरणका लागि डोमिन्गोलाई। निश्चितको लागि अरबौं फ्यानहरू!
म खुसी छु!
Naara Riveiro लाई जवाफ दिनुहोस्